Ny tombotsoan'ny tetikady marketing amin'ny atiny lehibe | Martech Zone
Fa maninona isika no mila marketing amin'ny atiny? Io no fanontaniana tsy dia havalin'ny olona marobe eto amin'ity orinasa ity. Ny orinasa dia tsy maintsy manana paikady atiny matanjaka satria ny ankamaroan'ny fizotran'ny fanapaha-kevitra dia nivadika, noho ny haino aman-jery an-tserasera, alohan'ny hahatongavan'ny fanantenana amin'ny telefaona, totozy, na vavahady fidirana amin'ireo orinasanay.
Mba hanan-kery eo amin'ny fanapahan-kevitry ny fividianana dia ilaina ny manome antoka fa misy ny marika, voatondro ho vahaolana izahay, ary ny orinasanay dia hita fa manam-pahefana. Raha misy ny atiny mety amin'ny fotoana mety sy miaraka amin'ny hafatra mety dia afaka manangana fahatokisana aloha isika amin'ny tsingerin'ny fividianana ary manao ny lisitr'ireo orinasa hisafidianana.
Ny orinasa avy amin'ny sehatra indostrialy isan-karazany amin'ny sehatra B2B sy B2C dia miankina amin'ny atiny samihafa sy ny fomba fanaovana marketing amin'ny atiny. Ny haino aman-jery sosialy, lahatsoratra, gazety ary bilaogy dia mijanona eo amin'ny paikady marketing atiny ambony ampiasain'ny orinasa maro araka ny hita eo amin'ny tabilao etsy ambony. Ny endrika atiny hafa koa dia mahazo laka sy malaza eo amin'ireo mpivarotra ao anatin'izany ny infografika sy horonan-tsary ankoatry ny hafa. Jomer Gregorio, Marketing amin'ny CJG Digital
Ny tombontsoa 8 tsy azo odian-tsy hita amin'ny marketing amin'ny atiny
Mamokatra bebe kokoa ny marketing amin'ny atiny fifamoivoizana miditra amin'ny tranokalanao.
Mitombo ny varotra atiny fifampiraharahana amin'ny mpihaino kendrena.
Miteraka ny varotra atiny mitarika bebe kokoa.
Mihombo ny varotra atiny lazan'ny rohy voajanahary.
Miorina ny varotra atiny fanentanana marika.
Ny marketing amin'ny atiny dia manangana anao a mpitarika eritreritra.
Ny marketing amin'ny atiny dia mora noho ny endrika marketing mahazatra.
Hmmm… ity farany dia mila fanovana. Na dia mety ho lafo kokoa aza ny varotra atiny amin'ny ho avy, dia mila ezaka sy ezaka kely izany hampitomboana ny mpihaino ilainao, hametraka ny fahefana tadiavinao ary hanomboka hitondra fiara. Tsy hiala amin'ny famatsiam-bola marketing hafa aho raha tsy mandeha ny lalana!
Tags: mpihainosoatombony amin'ny marketing amin'ny atinyfanentanana marikamanangana rohyvarotra mora vidytsena dizitaly cjgContent Marketingtombony amin'ny marketing amin'ny atinyandraikitramiteraka fitarihanafifamoivoizana miditrajomer gregoriolazan'ny rohympitarika eritreritraeritreritra fitarihanavarotra nentim-paharazana